Profaịlụ ụlọ ọrụ | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Winby Industry&Trade Limited
Ọkachamara kandụl soplaya ihe karịrị afọ 20
Kandụl na-emeri emeri nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji mepụta ụdị kandụl niile na-esi ísì ụtọ.Anyị nwere ahụmahụ bara ụba, teknụzụ tozuru okè na ahịa kandụl maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20. Ọzọkwa anyị nwere ndị otu ọkachamara na-enye ndị ahịa anyị si n'akụkụ ụwa niile ọrụ na kandụl kacha mma.
Anyị nwere ahụmịhe azụmaahịa dị mma na ngwaahịa ndị a: Kandụl iko na-esi ísì ụtọ, ọkụ tii, kandụl ogidi, kandụl Votive, ndị na-ejide kandụl, wicks na akụrụngwa ndị ọzọ nke kandụl.
Anyị kwenyere na àgwà ngwaahịa na ọrụ bụ mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ iji nyere ndị ahịa aka ịchekwa mmefu ego na oge. Inye oke mma na ọnụahịa asọmpi bụ nkwa maka mmekọrịta imekọ ihe ọnụ na-adịte aka. Ka ọ dị ugbu a, anyị esonyela na Canton Fair ruo ọtụtụ afọ. Nke a bụ ụfọdụ foto gị na onye ahịa anyị maka ntụaka gị.
Anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị iji mepụta kandụl na-esi ísì ụtọ.E nwere ọtụtụ narị ụdị dị iche iche nke kandụl na-esi ísì ụtọ.
Maka akụrụngwa, anyị na-eji paraffin wax, wax soy, beeswax na wax osisi ndị ọzọ maka kandụl anyị.
Maka ihe na-esi ísì ụtọ, anyị na-eji ihe karịrị 100 ụdị ísì ụtọ ahọpụtara maka kandụl ndị na-esi ísì ụtọ. Ndị na-eweta ihe na-esi ísì ụtọ bụ CPL aromas, symrise. Ha niile bụ ụdị kachasị nke ndị na-eweta ihe na-esi ísì ụtọ n'ụwa.
Anyị na-eji ihe eji esiji kandụl si na Bekro, ụlọ ọrụ kemịkalụ German ama ama. Ihe esijiji kandụl ha kwụsiri ike, na gburugburu ebe obibi.
Anyị nwere imewe na mmepe ngalaba, anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM na ODM maka ndị ahịa.
Enwere ike ịtụ ụfọdụ ihe n'ọnụ obere.
Isi ísì ndị ọzọ ewu ewu na agba mara mma dị.
Enwere ike iji kandụl na-esi ísì ụtọ na ime ụlọ ịwụ, ụlọ ọrụ, ime ụlọ yoga, ụlọ psychotherapy, na klọb, wdg. Scented kandụl nwere ike belata ọnọdụ ahụ n'ụzọ dị mfe na crate a ihunanya na ọmarịcha ísì ụtọ maka gị.
Biko mara: Mgbe ọkụ kandụl na-esi ísì ụtọ, ọnụ ụzọ na windo nwere ike mechie maka 10-30minutes, ga-emekarị ka ọnụ ụlọ ahụ jupụta na ihe na-esi ísì ụtọ kwekọrọ, mmetụta ahụ pụtara ìhè mgbe ị na-abanye n'ime ụlọ ahụ site n'èzí. Ekwesịrị ịzere kandụl ndị na-esi ísì ụtọ na mpaghara ebe ikuku ikuku na-agba ọsọ ngwa ngwa, nke ga-ebelata oke ahụmahụ iji.